एकै दिनमै दुई/तीनवटा दु’र्घटना हुन थालेपछि, जनकपुरबासि सडकमा उत्रिए ! – Aaj ko Sandesh
मुख्य पृष्ठ /News/एकै दिनमै दुई/तीनवटा दु’र्घटना हुन थालेपछि, जनकपुरबासि सडकमा उत्रिए !
एकै दिनमै दुई/तीनवटा दु’र्घटना हुन थालेपछि, जनकपुरबासि सडकमा उत्रिए !
२१ असार, जनकपुरधाम । सडक मर्मत गर्न कसैले ध्यान नदिएको भन्दै जनकपुरधामस्थित पुलचोकका बासिन्दाले हुलाकी सडकखण्ड अ’वरुद्व गरेका छन् । उनीहरुले टायर बालेर बिरोध गर्दै आइतबार बिहानैदेखि सडक अ’वरुद्ध गरेका हन् । स्थानीयवासीले जनकपुरधामदेखि यदुकोहा जाने हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत जनकपुरधाम १६ मा सडक जाम गरेका छन् । सडकमा सवारीसाधन गुडाउन समस्या हुने गरी खाल्डा परेको स्थानीयवासीले बताएका छन् ।
खाल्डोमा पानी जमेपछि आवतजावतमा नै समस्या भइरहेको स्थानीय कृष्णप्रताप साहको भनाइ छ । कोही बि’रामी हुँदा अस्पतालसम्म लैजानसमेत नसकिने अवस्था आएको भन्दै उनले खाल्डोका कारण दिनहुँ दुई/तीनवटा दु’र्घटना हुने गरेको बताए ।
सडक मर्मत गरिदिन पटक-पटक वडाध्यक्षदेखि मेयर र हुलाकी आयोजनाका पदाधिकारीलाई भन्दासमेत कसैले ध्यान नदिएका कारण आन्दोलनमा उत्रिनु परेको उनको भनाइ छ । वर्षामा जमेको पानीका कारण खाल्डो पोखरीजस्तै बनेको छ । सडक अ’वरोधका कारण दर्जनौं मोटरसाइकल सडकमै रोकिएका छन् ।
कारागारमा रहेका ७०० कैदीलाई कोरोना, आठको मृत्यु
बिरामी बोकेको एम्बुलेन्सलाई तोडफोड गरेर बिरामीलाई बोकेर अस्पताल लैजादै गरेको दर्दनाक दृश्य ??